ဘကြီးအောင်ရဲ့ (၈၄) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ကန်တော့ခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကြီးလူရွှင်တော်များ - Cele Connections
ဘကြီးအောင်ရဲ့ (၈၄) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ ကန်တော့ခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကြီးလူရွှင်တော်များ
ဘကြီးအောင်လို့ ပရိသတ်တွေချစ်စနိုးခေါ်ရတဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ဦးအောင်လွင်က တော့ အသက်ကြီးပေမယ့်လည်း အခုချိန်ထိ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ပရိသတ်ကိုပေးဆပ်နေဆဲ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ ။ အဖြူအမဲရုပ်ရှင်ခေတ်က မင်းသားဘဝကနေ လက်ရှိ အဖေခန်း အဘိုးခန်းတွေထိ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့ အနုပညာသက်ကတော့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာ မက ရှိခဲ့ပါပြီ ပရိသတ်ကြီးရေ ..။
အောက်တိုဘာလ (၂၃) ရက်နေ့ကတော့ ဘကြီးအောင်ရဲ့ အသက် (၈၄) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာရက်မြတ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘကြီးအောင် ကိုချစ်ခင်ကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေက ဘကြီးအောင်ရဲ့ မွေးနေ့မှာ ဂါရဝတရားရှေ့ထားပြီး ကန်တော့ ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ် ။ ဘကြီးအောင်ကို သွားရောက်ကန်တော့ခဲ့ကြသူတွေကတော့ သရဲလေးကောင် လူရွှင်တော်အဖွဲ့ဝင် ဦးအရိုင်း ၊ ငှက်ပျော်ကြော် နဲ့ လူရွှင်တော်ကြီး ဇာဂနာတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။မွေးနေ့ကန်တော့ ပုံရိပ်တွေကို ” အောက်တိုဘာလ မွေးဖွားသူတွေဟာ ဆိုရင်ဖြင့်ေ အာင်မြင်တယ် ကျော်ကြားတယ် လူချစ်လူခင်များတယ် … ဇွဲကောင်းတယ် သတ္တိရှိတယ် အမှန်တရား မြတ်နိူးတယ် …သနားကြင်နာတတ်တယ် … ချစ်တတ်တယ် … ” ဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူ ငှက်ပျော်ကြော်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ နေဇာဖုန်းမြင့်က ရေးသားမျှဝေပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဘကြီးအောင် ပျော်ရွှင်ပါစေ ကျန်းမာပါစေ. .. အသက်ရှည်ပါစေ ၀ါသနာကြီးတဲ့အနုပညာအလုပ်ကိုလည်း စွမ်းဆောင်နိုင်သေး တဲ့အချိန်ထိ လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပြီး ချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားနေပါစေကြောင်း Cele Connections မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။ ဘကြီးအောင်ကိုချစ်တဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးကလည်း မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းလေးတွေ ရေးပေးခဲ့ကြပါဦးနော် ..။
Source : Nay Zar Phone Myint
ဘကွီးအောငျရဲ့ (၈၄) နှဈပွညျ့မှေးနမှေ့ာ ကနျတော့ခဲ့ကွတဲ့ နာမညျကွီးလူရှငျတျောမြား
ဘကွီးအောငျလို့ ပရိသတျတှခေဈြစနိုးချေါရတဲ့ ဝါရငျ့သရုပျဆောငျဦးအောငျလှငျက တော့ အသကျကွီးပမေယျ့လညျး အခုခြိနျထိ အနုပညာအလုပျတှနေဲ့ ပရိသတျကိုပေးဆပျနဆေဲ အနုပညာရှငျတဈယောကျပါ ။ အဖွူအမဲရုပျရှငျခတျေက မငျးသားဘဝကနေ လကျရှိ အဖခေနျး အဘိုးခနျးတှထေိ ပါဝငျသရုပျဆောငျနဆေဲဖွဈတဲ့ သူ့ရဲ့ အနုပညာသကျကတော့ ဆယျစုနှဈတဈခုစာ မက ရှိခဲ့ပါပွီ ပရိသတျကွီးရေ ..။
အောကျတိုဘာလ (၂၃) ရကျနကေ့တော့ ဘကွီးအောငျရဲ့ အသကျ (၈၄) နှဈပွညျ့မှေးနမေ့င်ျဂလာရကျမွတျလေးပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ဘကွီးအောငျ ကိုခဈြခငျကွတဲ့ အနုပညာရှငျတှကေ ဘကွီးအောငျရဲ့ မှေးနမှေ့ာ ဂါရဝတရားရှထေ့ားပွီး ကနျတော့ ခဲ့ကွတယျလို့သိရပါတယျ ။ ဘကွီးအောငျကို သှားရောကျကနျတော့ခဲ့ကွသူတှကေတော့ သရဲလေးကောငျ လူရှငျတျောအဖှဲ့ဝငျ ဦးအရိုငျး ၊ ငှကျပြျောကွျော နဲ့ လူရှငျတျောကွီး ဇာဂနာတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ ။မှေးနကေ့နျတော့ ပုံရိပျတှကေို ” အောကျတိုဘာလ မှေးဖှားသူတှဟော ဆိုရငျဖွငျ့ေ အာငျမွငျတယျ ကြျောကွားတယျ လူခဈြလူခငျမြားတယျ … ဇှဲကောငျးတယျ သတ်တိရှိတယျ အမှနျတရား မွတျနိူးတယျ …သနားကွငျနာတတျတယျ … ခဈြတတျတယျ … ” ဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူ ငှကျပြျောကွျောရဲ့ ဇနီးဖွဈသူ နဇောဖုနျးမွငျ့က ရေးသားမြှဝပေေးထားတာ ဖွဈပါတယျ ။
ဘကွီးအောငျ ပြျောရှငျပါစေ ကနျြးမာပါစေ. .. အသကျရှညျပါစေ ဝါသနာကွီးတဲ့အနုပညာအလုပျကိုလညျး စှမျးဆောငျနိုငျသေး တဲ့အခြိနျထိ လုပျဆောငျသှားနိုငျပွီး ခဈြတဲ့မိသားစုနဲ့အတူ ပြျောရှငျစှာနထေိုငျသှားနပေါစကွေောငျး Cele Connections မှ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော ။ ဘကွီးအောငျကိုခဈြတဲ့ ခဈြပရိသတျကွီးကလညျး မှေးနဆေု့မှနျကောငျးလေးတှေ ရေးပေးခဲ့ကွပါဦးနျော ..။
“မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက် Official Trailer ကြည့်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူ ပိုင်ဖြိုးသုအတွက် ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ဏကြီး”
အနွေးထွေးဆုံး မေမေ့ရဲ့ ရင်ခွင်လေးမှာ ပြန်လည်မှေးစက်ခွင့်ရလို့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ မင်းသန့်မောင်မောင်
Club မှာ အတူတူကနေရင်း အလင်းရောင်ရဲ့ပါးကို အနမ်းလေးခြွေခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ဗီဒီယို